Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: mandina indray andro ny tendan’ny mponina sahirana | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: mandina indray andro ny tendan’ny mponina sahirana
Fomba fiteny moa izany hoe indray andro izany, ny voalaza amin’izany dia hoe ao anatin’ny fehi-potoana voafetra ho fohifohy ihany. Raha vao mitsidika ny fotoana fanaovana fifidianana dia maro no efa mitelin-drora mialoha, aza manody izany kakerin’ny anoanana lalandava izany ! Maro anefa ny mpiray tanindrazana ianjadin’izany, aiza no tsy ifaliny mialoha raha vao henony fa injay raikitra ny fifidianana. Atao ahagaga ve ny fisehon’ny hatsaram-panahy manodidina fa indrindra indrindra
amin’ny fotoana mialohan’ny fifidianana. Tonga mitsidika hatrany an’efitra izao karazana olona manan-kaja sy manan-katao izao. Na tsy tia ahalala na hoe manadinodino an’ireny mpiray tanindrazana osaosa ireny izy ireo andavanandro dia tonga mamangy ary tsy vitan’ny mitondra teny mamy fampiaretana amin’ny fizakana mangidy fa matetika mivimbina fotsim-bary fampitonina ny ambavafo sy fanalana ny maisamaisatra sy ny mikaokaoka ao an-tenda. Tsy itondra lavitra ny tsipy kely toy izany hoy ny mpananatra izay tsy malala-tànana koa anefa ho fitondrana sedra eo amin’ny fahantrana zakain’ny maro. Ho an’ny olona ramaka, na avy aiza na avy aiza ny fisehon’ny fahagagana, sitrany ahay vaza-mihetsika. Izany anefa tsy milaza fa tsy maintsy voafitaka izy, efa ela nietezana tao anatin’ny fahoriana ka manana ny afetseny manokana matetika ny olona miaina ao anaty fahantrana. Mety iseho mody bado izy ireny, fa
amin’izao fotoana izao dia ireo miseho malala-tanàna indray no ataony fihomehezana. Ahin’ny sahirana no miheno sy mandinika, rehefa tsapan’ny tononkalo ilain’ilay mpitsidika ho heno dia iny tononkalo iny no vetsoiny, izy koa ny tena fampisehon’ny maha kristianina azy dia ny fandavana fanomezana, tsy manakana ny maha kristianina azy anefa ny fitakoritsihana raha voadify ny mpitsidika ka miara-mifaly sy mitokelaka hehy ny mpiray tanàna, «matsiro hono ny volan’adala tompo». Na izany aza manafatra izy ireo no mba tsy aparitaka be loatra ny momban’ izany, sao dia diso fihinanana rizareo amin’izao andro maitso ahitra izao. Resaka be izany, fa angaha moa manana andro miratra ny olona latsaka ao anaty fahaterena ? Hany tanjona tokony apetraka anie dia ny fahafahan’ny maro avy ao anatin’ny fahasahiranana izay ! Ny fahasahiranana moa tsy maintsy misy foana, fa ny fahasahiranana manototra olona toy izao no mendrika ezaka entina hisorohana azy. Rehefa tototra anefa dia tsy afaka hiaino mikasika ny lavitra, ny fanavotan-tena anio no hany manjaka ao an-doha.